Himalaya Dainik » शिव श्रेष्ठ देखिए बर्षाको बिहेमा, श्रीमतीसँगको सम्बन्धबारे सोध्दा किन तर्किए ? (भिडियो)
शिव श्रेष्ठ देखिए बर्षाको बिहेमा, श्रीमतीसँगको सम्बन्धबारे सोध्दा किन तर्किए ? (भिडियो)
नेपाली फिल्म इन्डष्ट्रिमा नायक शिव श्रेष्ठको चर्चा सधैँ नै हुनेगर्छ। नायक शिव श्रेष्ठ जहिलेपनि विशेषगरी ओम साईराम भन्न रुचाउँछन् र उनै शिव श्रेष्ठ हालैमात्र नायिका वर्षा राउतको म्यारिज सेरेमोनीमा पुगेका थिए । उनी उक्त सेरेमोनीमा एक्लै पुगेका थिएनन् । उक्त कार्यक्रममा उनी आफ्नी श्रीमती र सानो छोराको साथमा देखिएका थिए ।
शिव श्रेष्ठकी श्रीमती र उनका छोराको जुन जोडी देखिएको थियो त्यो जोडी निकै आकर्षक पनि देखिएको थियो । सोही समयमा एक पत्रकारले नायक शिव श्रेष्ठलाई विशेषगरी आफ्नो घरपरिवारको बारेमा अझ भनुँ भने उनको वैवाहिक जीवन कस्तो भइरहेको छ भनेर केही बताउन आग्रह समेत गरेका थिए । तर, नायक श्रेष्ठले निकै चतुर्याई पूर्वक जवाफ दिएका छन् ।
उनका छोरा निकै ह्यान्डसम पनि भएका छन् । उनका जेठा छोरा जो जेठी श्रीमतीका छोरा रहेका छन् शक्ति, उनी यतिबेला अमेरिकामा बसेर पढिरहेका छन् भने कान्छी श्रीमतीका छोरा भने यतिबेला नेपालमै छन् र उनी पनि विस्तारै हुर्कंदै छन् ।
दोस्री श्रीमतीसँग बिहे गरेपछि नायक शिव श्रेष्ठको घरबार कस्तो चलिरहेको छ त? किन नायक शिव श्रेष्ठले यसको जवाफ दिन चाहिरहेको छैन? किन नायक शिव श्रेष्ठले यसको जवाफ दिनको लागि आफ्ना सानो छोरालाई आग्रह गरे?